Mianara mandoko hosodoko menaka amin'ny alàlan'ny antsy paleta | Famoronana an-tserasera
«Tanàna mangina» avy amin'i artistcart dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Amin'izao fotoana izao, ny borosy dia nangalatra ny andraikitry ny spatula, mamela antsika hamorona tarehimarika amin'ny fomba mazava kokoa. SAINGY ny spatula, ilay adino iray lehibe, dia afaka mameno ny sary hosodontsika amin'ny fanehoana hevitra.
Misy habe sy endrika maromaro, izay hampiasaina arakaraka ny tiantsika hatao sy ny tsiro an'ilay mpanao hosodoko. Ny mahazatra indrindra dia ny mpanelanelana amin'ny endrika diamondra. Ho hitantsika ny manaraka tombony amin'ny fampiasana azy:
1 Tsy mila mampiasa solvents
2 Azonao atao ny manambatra azy amin'ny borosy
3 Mamela anao hanala loko mora
4 Afaka manasa azy mora foana isika
5 Mamela antsika handoko haingana dia haingana
Tsy mila mampiasa solvents
Ny spatula dia ampiasaina mivantana amin'ny menaka, tsy mila afangaro amin'ny vokatra hafa, satria ahafahantsika mampiasa loko miaraka amin'ny hateviny lehibe kokoa, tsy toy ny borosy.
Azonao atao ny manambatra azy amin'ny borosy
Raha mampiasa spatula sy borosy miaraka amin'ny asa iray ianao, Ny nuances azonao atao dia tsy manam-petra! Ohatra, azonao atao ny manintona ireo singa ao ambadika miaraka amin'ny spatula (toy ny tendrombohitra) sy ireo singa izay mitaky marimarina kokoa amin'ny borosy (hazo).
Mamela anao hanala loko mora
Rehefa mandoko amin'ny sosona matevina isika dia afaka manala azy ireo mora foana amin'ny spatula raha sendra nanao fahadisoana isika.
Afaka manasa azy mora foana isika
Tsy toy ny zava-mitranga amin'ny borosy, izay mitaky vokatra manokana amin'ny fanadiovana sy fikarakarana tsy tapaka, mora kokoa ny manadio ny spatula. Izany dia hahatonga antsika handoko haingana kokoa, afaka manova loko mora foana tsy mifangaro amin'ny loko teo aloha, toy ny mety hitranga amin'ny borosy.
Mamela antsika handoko haingana dia haingana
Raha misy mpanakanto iray niavaka tamin'ny fampiasana antsy palety dia ilay mpanao hosodoko Bob Ross mahay mamorona hosodoko menaka manaitra ao anatin'ny antsasak'adiny fotsiny. Afaka mianatra bebe kokoa momba azy ianao amin'izany lahatsoratra teo aloha.
Ary ianao, inona no andrasanao hilentika ao anatin'ity tontolo mahaliana hosodoko antsy palety ity? Andramo izany dia ho gaga ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana ny fandokoana menaka amin'ny antsy palety